Nadiifinta ah iPod - Sidee iyo sababta oo ah
In badan oo naga mid ah waa Apple jecel iyo iPod waa mid ka mid ah qalabka kuwa in qof walba u baahan yahay. iPod, qalabka madadaalada caan ah oo ka Apple, waa in mid kastoo lover music doonayo inuu leedahay. In kastoo ay eegto oo quruxsan oo adag, waxaad u baahan tahay in si habboon loo hayn sidii ay gaadhi kartaa run ahaantii si deg deg ah u burburay. Si loo joogteeyo, waa in aad u nadiifiso qalabka aad si joogto ah, si ay u quruxdiisa xajisto. Waxaa jira qaybo kala duwan oo ay tahay in aad la screen sida, dib, earbuds, headphones, Jack headphone iyo xaaladaha ka qabtaan.
Wondershare SafeEraser - Ilaali macluumaadkaaga shakhsiyeed
Si joogto ah masixi Your Android & iPhone
Saar la tirtiro Faylal ay ku macruufka Devices
Xogta gaarka ah oo cad cad ee macruufka Devices
IDevices Free Up Space iyo Speed ​​Up
Taageerada iPhone (macruufka 6.1.6 iyo sare) iyo qalabka Android (ka Android 2.1 si ay Android 6.0).
Qaybta 1. Sidee loo nadiifiyaa screen iPod ah
Shaashadda taabto waa qaybta ugu isticmaalay ee aad iPod. Haddii farahaaga yihiin saliid ama sii dhidid, shaashadda aad u xambaari culaysyaalkooda waxaa ka mid ah. Waa in aad aad screen sii nadiif ah, saliid lacag la'aan ah iyo qoyaanka oo lacag la'aan ah. Halkan waa sida aad u qaadan kartaa daryeelka aad screen:
Wax First tahay in aad sameyso waa in uu kugu xidho oo dhan fiilooyinka, iyo demi aad iPod. Si aad in uun wax miiran qaban hurdo ama toosin button ka dibna uma simbiriirixan slider ka onscreen.
Hadda isticmaalaan maro jilicsan, qoyan, iyo marada-free.
Shaashadda dhaqaaq wareeg ah u nadiifi.
Marna ha u isticmaalin guriga lagu nadiifiyo, hawada Tifaftirayaasha, ammonia, buufis, ama lagu nadiifiyo kale si aad u nadiifiso shaashadda. Hubi in aad uma taabato furitaanka maro qoyan.
Qaybta 2. Sidee loo nadiifiyaa dambe ee iPod ah
Sida screen, xagga dambe ee iPod ah ayaa sidoo kale noqon kartaa dufan iyo wasakh ah. Waxaad kaloo isticmaali kartaa hab la mid ah si aad u nadiifiso dambe ee iPod ah sida shaashadda. Si kastaba ha ahaatee, wax muhiim ah in la is ogow waa in ay ka fogaadaan wax kasta oo sida furitaanka Jack headphone ama slider. Idinkuna ma waxaad doonaysaan qoyaan galo jirka ka mid ah iPod ah. Waa kuwan tallaabooyinku inay raacaan halka nadiifinta dambe ee iPod ah:
Dami oo dhan fiilooyinka ka iPod ah oo u soo jeesan qalabka button baraarujin / hurdo la isticmaalayo.
Qaado dhar jilicsan, qoyan, iyo marada-free. Si aad u nadiifiso dambe ee aad isticmaali karto lagu nadiifiyo ee loo isticmaalo nadiifinta computer, LCD ama telefoonka screens.
Hadda si fiican u nadiifi, hubi in uu yahay mid qalalan oo nadiif ah ka dib. Haddii maro marada-free maro qalalan isticmaalka suurto gal ah in ay nadiifiso waxaa qoyay.
Mar kasta oo aad isticmaasho iPod in aad isticmaasho gacmaha qallalan oo nadiif ah, si looga fogaado saliid, dhididka ama wasakh yaala gadaasha dambe ee iPod dhigi.
Qaybta 3. Sidee loo nadiifiyaa earbuds iPod
Iyada oo la isticmaalo si joogta ah, earbuds maraan badan. Waxaa la kulmin uus, bakteeriyada iyo saliid iyo sidaas u baahan yahay daryeel. Haddii aad isticmaalayso biqilka dhegta wax waqti dheer iyada oo aan wax lagu nadiifiyo, uus ururtay badan ku hari dhegta waxaad arki lahayd. Isha wasaq noqon kartaa badan. In badan oo naga mid ah ay isticmaalaan earbuds marka ay u basaska, ka shaqeeya, ama marka in Earbuds jimicsiga gudbin kara bakteeriya waxyeelo leh ama caabuqa haddii la wadaago qof ka qof. Sidaa awgeed, waxa earbuds muhiimka ah sii nadiif ah. Halkan waxaa ku qoran xoogaa tallaabooyin ah oo aad raaci karto si ay u sii nadiif ah.
Isticmaal nadiifiye debecsan sida biyo kulul ama saabuun. Qoo maro tur la oo nadiif ah si sax ah. Hubi in aadan biyo ama saabuunta tago, waxa ay noqon doontaa mid waxyeello u xarkaha.
Haddii ay jirto wax badan oo ka mid ah wasakh ama bir, isku day buraashka debecsan. Burushka noqon kartaa fikrad wanaagsan in la nadiifiyo ciidda.
Haddii aad earbud waa saari markaa isku day waxa ay ka saareen oo si gooni gooni ah u nadiifiso.
Iska ilaali qoyaan badan ama biyo iyo gabal dhegta halka lagu nadiifiyo. Ha qalalan nadiifinta ka dib.
Qaybta 4. Sidee loo nadiifiyaa headphones iPod
Sameecadaha dhegaha la mid ah earbuds yihiin oo ay maraan xaalado la mid ah. Waxaad isticmaali kartaa habka nadiifinta la mid ah sida kor ku xusan. Halkan waxaa ku qoran tallaabooyinka ay kuu raaci kari waayay:
Isku qas saabuun khafiif ah qaar ka mid ah biyo diiran. Isticmaal maro qabow oo u dejinaaya la.
Ha ogolaan in headphones ah. Haa haddii ay tahay Silicon daboolida saari karo, waxa ka saar oo iyaga si gaar ah u nadiifiso.
Xaaladdan oo kale waxay u baahan tahay nadiifinta ballaaran, u isticmaalaan qamriga laakiin isticmaalaan Q-tip.
Qaybta 5. Sidee loo nadiifiyaa Jack headphone ah
Waxaa laga yaabaa in dhibaato la xidhiidha, taas oo keeni karaan waayo-aragnimo music khilaafsan. Jack wuxuu u baahan yahay in la nadiifiyaa si nadiifiyo uus. Halkan waxaa ku qoran xoogaa tallaabooyin ah oo aad raaci karto si aad u hubiso in aad leedahay xiriir wanaagsan:
Qaadan kartaa hawada soo afuufi soo Carro iyo marada, kaas oo uu u ururay oo dhan.
Waxaad isticmaali kartaa Q-tip si aad u nadiifiso. Hubi in aad isticmaasho si taxadar leh aan ka tago strand suuf kasta oo dhan.
Qaado warqad clip oo toosi. Hadda isticmaali cajalad joogto ah oo ku duub gaararkiisa ah la kor kooxda dhagta. hubiyo in Ilbidhiqsi. Isticmaal ay ka soo baxdo burburka ama marada.
Qaybta 6. Sida loo kala cadeeyo xaaladaha iPod
Qaar badan oo ka isticmaali xaaladaha iPod in iPod ee Carro, saliid iyo marada ilaaliyo. Sidaas darteed daboolida samayn heli wasakh yar, marada iwm Si kastaba ha ahaatee, aadan si joogto ah u nadiifiso, waa qaribi kara daboolka ama sidoo kale ma u fiican tahay in aad caafimaad ahaan doonaa. Waxaa jira laba nooc ka mid ah xaaladaha ka bixiyaan Apple, Silicon ku salaysan iyo maqaar ku salaysan. Labada baahan tahay daaweyn kala duwan.
Xaaladaha ku salaysan silikoon
Had iyo qalabka ka kiiska ka saar. Isticmaal jilicsan, qoyan, maro-marada si xor ah u tirtiri ka baxsan iyo gudaha ee kiiska. Marna ha u isticmaalin nadiifiyo aad isticmaasho guriga. Haddii ay suurtogal tahay isticmaal nadiifiyaha shaashadda kombiyuutarka.
kulan oo ka mid ah waxa ay bedelaa wakhti iftiinka, iyo saliidda. In si ay u nadiifiso, isticmaalna maro nadiif ah oo biyo diiran iyo saabuun khafiif ah sida gacmaha ku dhaqo. Waxaad mar walba isticmaali kartaa nadiifiyo maqaar iyo conditioners si ay u ilaaliyaan midabka ah ee maqaar.
Simple iyo Safe Habka ay u kaabta iPod Music One Click
2 Siyaabo Sahlan ee Suuqa Music ka iPod in Lugood
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPod shaandheeyn in Computer
Sida loo saar music on shaandheeyn lagu iPod
> Resource > iPod > Nadiifinta iPod ah - Sidee iyo sababta oo ah